Dowladda Soomaaliya oo beenisay inay fasaxday jaadkii laga keeni jiray Kenya - Awdinle Online
Home News Dowladda Soomaaliya oo beenisay inay fasaxday jaadkii laga keeni jiray Kenya
Xilli saacadihii la soo dhaafay aad loo hadal haayay in dowladda Soomaaliya ay xayiraadii ka qaaday jaadkii laga keeni jiray dalka Kenya ayaa waxaa warkaasi beenisay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in hadalkii uu shalay warbaahinta u sheegay si qalad ah loo dhigay, isaga oo aan soo hadal qaadin jaadka laga keeni jiray Kenya oo ay dowladda Soomaaliya joojisay.
Wasiirka waxaa uu sheegay in ujeedkiisa uu ahaa in uu ka jawaabo jaadka hareeriga ee laga keeno dalka Itobiya oo dad badan ay sheegeen in dad gaar ah uu u xiran yahay, waxana uu sheegay in cid walba ay soo degsan karto.
Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in cid walba ee dooneysa in jaad ( qaad) dalka keenta ay qaadato rugsada, sidoo kalena uu Canshuurta iska bixiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa kal hore u joojisay qaadka sababo la xiriira cudurka COVID-19 oo kiisas kamid ah laga helay dalka, hayeeshee markii dambe ay sigaar ah u mamnuucday in la keeno Somaaliya jaadkii ka imaan jiray Kenya, taas oo dad badan u fasireen arrimo siyaasadeed.
Previous articleDagaal culus oo ka dhacay duleedka Baydhabo & askar lagu dilay
Next articleCabsi kajirta Magaalada Mandheera iyo dad ka barakacaya